Joanne: Zvandinovenga nezvekugara pawiricheya
Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau
Posted on March 19, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Joanne, uyo anotamburawo ne scoliosis, anoshandisa mhino, miromo, uye chirebvu kushandisa michina yakaita yelaptop yake.
1 - Ndinovenga kugara ndichitarisa uye kutonga. Ini ndiri mukadzi zviri pamutemo izvozvi, ndinogona kuenda kunotandara neshamwari dzangu saka ndokumbirawo kana uchindiona, usanditonge, ini ndakangofanana newe. Vanhu vanogara vachindibvunza kuti nei ndichivenga kuenda kunze.
Zvakanaka, nekuti kana ndikaonekwa ndine chinwiwa vanhu vanobva vafunga kuti ndiri kuzokundwa ndofa. Ndine njere, (ndinofunga, ndinoziva zvandiri kuita)
2 - Ndinovenga kushomeka kwekuwana. Hongu, ndiri kuzvidzokorora kubva muzvinyorwa zvakapfuura, asi kana ndikaona nhanho dzichipinda mukirabhu yehusiku ndiko kudzima uye, sezvo ini ndichave ndichipemberera magumo angu upenyu chikoro munguva pfupi, zvakaoma kushamwari dzangu kuronga chimwe chinhu chakakura kana hafu yenzvimbo dzisiri kufambidzana.
Zvakare, nhanho mubhawa rehusiku zvine njodzi, funga nezvezvidhakwa zvinogona kuzvikuvadza nekumhan'ara - usati handina kukuyambira!
3 - Ini ndinovenga chokwadi chandinofanira kuronga nguva dzese. Iwe unogona kusimuka uye sarudza 'Ndiri kuenda kune jog'. Ini, ndinofanira kufonera mai vangu kuti vandimutse, vanofanirwa kundipfekedza uye ndinofanira kubva ndavaudza kuti ndiri kuenda kunze uye vanogona kundisiya ikoko.
Zvinotyisa. Ini ndinogara ndine kurota uku kuti rimwe zuva ndinogona kukwira ndege ndongoenda ndichifamba ndoregedza.
4 - Ini ndinovenga chokwadi vanhu vari mawiricheya dontinosangana kazhinji. Tarisa, ndinoziva isu tese tiri kunze uko - sei isu tese tisina kungosarudza nzvimbo uye kuva nehumungus kusangana?
Ini pachangu, ndinofunga harifanirwe kunge riri sangano rinoronga izvi, zvakanaka, nekuti, masangano anobatsira haasi kuratidzwa zvakanaka. Ini ndaizoda kuzviita, asi ndinovimba vanhu ava havangarambe kumisikidza kusvika Chikunguru kana pamwe Nyamavhuvhu!
5 - Chii chandinovenga zvakanyanya? Hapana munhu, mupfungwa dzangu, anondinzwisisa. Hongu, ndine shamwari huru inonzwisisa yandinogona kuudza zvese, asi chokwadi, ndinofunga vanhu vari mukati mavhiripu vane matambudziko akakura anongonzwisiswa nerudzi rwedu chete.
Yekutanga Chinyorwa naJoanne O'Riordan - Irish Examiner
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, famba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.
Nhasi Mune Nhoroondo
Vanodheerera Kushungurudzwa Nevanodheererwa